Umuthi we-antipyretic, isibulala-magciwane, Umuthi onomsoco - Ukudambisa
Umuthi Wokulwa Negciwane
imishini yemithi, izinto zokupakisha kanye
Isixazululo se-Povidone idoine 5%
I-Iron Dextran injekishini
Ukumiswa kwe-Albendazole 2,5%
I-Oxytetracycline i-soluble powder 50%
Isixazululo somlomo weFlorfenicol
Mayelana nencazelo yefekthri
I-Hebei Depond Animal Health Technology Co, Ltd. yasungulwa ngoSepthemba 9, 1999 ngomugqa wokukhiqiza oqinisekisiwe oyi-13 GMP. Inkampani yethu, njengenye yamabhizinisi aphezulu wezokwelapha e-Top 500 eChina, sekuyibhizinisi elikhulu elaziwayo elizinikezele ekucwaningeni nasekukhiqizeni imikhiqizo yezempilo yezilwane ebangeni eliphakeme. Ifektri yethu itholakala eMengtong Industrial Zone eShijiazhuang enendawo yokukhiqiza esezingeni eliphezulu ebandakanya indawo enamamitha-skwele angaphezu kuka-30,000 kanye nabasebenzi abangama-350. Sinezintambo zokukhiqiza eziyi-13 ngokuya nge-GMP ejwayelekile nezinhlobo zemikhiqizo ezingaphezu kuka-300, kufaka uketshezi ngomlomo, ithebhulethi, ugogo, isifutho, okokugcoba, amakhambi, umjovo, impuphu yemithi yasentshonalanga, izithako zemithi kanye nezibulala magciwane.
I-2019 Depond idlule ngempumelelo ukuhlolwa kwe-GMP yaseSudan
Ukusuka ngoDisemba 15 kuya ku-19, 2019, u-Hebei Depond ukwamukele ukwamukelwa kanye nokuvunywa koMnyango Wezolimo waseSudan ...
I-2019 Depond idlule ngempumelelo i-Ethiopia GMP ku ...
Kusukela ngo-Okthoba 21 kuya ku-23, 2019, u-Hebei Depond wemukele ukwamukelwa kanye nokuvunywa koMnyango Wezolimo wase-Ethiopia. Ithimba lokuhlola lidlule ukuhlolwa kwesiza sezinsuku ezintathu nokuvuselelwa kwedokhumenti ...
Ngo-2019 kudlule ngempumelelo izwe lonke ...
Kusukela ngo-Okthoba 19 kuya ku-20, 2019, iqembu labachwepheshe bezokwelapha i-GMP lesifundazwe lase-Hebei lenza umuzwa wokuhlolwa kabusha kwemithi yemvelo yeminyaka engu-5 eDepond, esifundazweni saseHebei, ngokubamba iqhaza ...
Ngo-2019 Dlulisa amehlo ezweni lase-China nge-17 ...
NgoMeyi 18, 2019, i-17th (2019) iChina China Husbandry Expo ne-2019 i-China International Animal Husbandry Expo yavulwa eWuhan International Expo Center. Ngenhloso nomsebenzi wokuqamba izinto ezintsha ...
Izincwadi zethu zezindaba, imininingwane yakamuva ngemikhiqizo yethu, izindaba nokunikelwayo okukhethekile.
No.8 Shuangtong Road, isifunda saseLuquan, idolobha iShijiazhuang, isifundazwe saseHebei, China
Ukuthengisa (whatsapp): 0086-15833990707
Ukuthengisa (whatsapp): 0086-13933828863
UMsombuluko - ISonto: 9 am to 6pm